Andrefanambohijanahary : Voasambotra ireo telolahy mpisoloky” mercure” -
AccueilSongandinaAndrefanambohijanahary : Voasambotra ireo telolahy mpisoloky” mercure”
Andrefanambohijanahary : Voasambotra ireo telolahy mpisoloky” mercure”
10/02/2018 admintriatra Songandina 0
Vao miandoha ny taona, dia resaka fisolokiana avo lenta, izay efa mpiseho matetika no heno sy hita etsy sy eroa. Taorian’ny nahatraran’ny polisy ireo roa vavy nisoloky fiaran’olona tao anaty tambazotran-tserasera “facebook” mantsy, vao tsy ela kory izay, dia telolahy indray no voasambotry ny zandary teny Andrefanambohijanahary noho ny resaka fisolokiana “mercure” ny 06 febroary lasa teo. Mpisoloky efa voasokajy ao anatin’ireo ikoizana sy efa za-draharaha amin’ny fanaovana ity asa ratsy ity ireto farany, raha ny paikady entin’izy ireo manatanteraka izany no jerena. Niroso avy hatrany tamin’ny fanadihadiana moa ireo zandary rehefa nandre tamin’ny fikaroham-baovao fa misy andian’olona mpisoloky, izay milaza fa manana “mercure”, ary mandraoka volan’olona fotsiny mirenireny any ho any.
Araka ny nambaran’ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenana, dia ny anaran’izy ireo no isan’ny ampiasain’ireo olon-dratsy sy hataon’izy ireo fitaovana handraofana ny volabe an’ireo olona hosolokiana. Milaza mantsy izy telolahy ireto fa tazonin’ny zandary any amin’ny tany tsy fantatra ny naman’izy ireo antsoina hoe Alain, miaraka amin’ny “mercure” roa litatra ao anaty “thermos” misy teny miafina avy amina teknisianina iray ao amin’ny ambasady Amerikanina. Ho takalon’io lehilahy io sy ny entana, noho izany dia mitaky vola roa tapitrisa Ariary ireo mpitandro filaminana. Amin’izany dia resen’izy ireo lahatra ilay olona ny andefasana ilay vola any amin’ny findain’io naman’izy ireo voatazona io. Ny tena zava-doza aza, dia nolazain’ireto olon-dratsy ireto fa hovonoin’ireo zandary io olona voalaza anarana etsy ambony io raha tsy omena vola izy ireo. Ho setrin’izay fanampiana izay sy entina handresen-dahatra ilay hopetahana, dia baboan’ireto olon-dratsy amin’ny fahaiza-miresaka ireo niharan’ny asa ratsy fa omen’izy ireo ny ampahatelony amin’ny vidin’io “mercure” izay efa nojifaina teratany vahiny amina miliara maro io.
Fanaraha-maso sy vela-pandrika
Efa fantatra sy mazava tamin’ireo mpitandro filaminana ny fomba fiadin’ireo mpisoloky avo lenta ireto, ka nisy ny fanaraha-maso tsy tapaka sy ny vela-pandrika napetraka, mba hahafahana misambotra azy ireo. Nohenoina avokoa ny resaka izay nataon’ireto olon-dratsy ireto tamin’ny alalan’ny antso an-telefaonina, izay nilaza fa hiantso an’i Alain hiady varotra, ka voaporofo fa tsy misy akory izany, fa tantara noforonina fotsiny ihany. Na dia teo aza ireo rehetra ireo, dia nalaina sary, ary mody nomena azy ireo ihany ny vola iray tapitrisa Ariary mahery kely, izay tapaka fa haloa any amin’ireo zandary nolazainy fa mila tsolotra. Vao nivoaka ny vavahady anefa izy ireo, dia noraisim-potsiny, satria efa nivonona ireo manam-pahefana hisambotra azy telolahy ireto. Tamin’ny fakana am-bavany azy ireo, dia niaiky ireto farany, ary nilaza izy ireo fa efa maro ny olona voany. Rehefa vita ny famotorana, dia atolotra eo anatrehan’ny fampanoavana ny raharaha.
Kung Fu tarihin’i maitre Avoko : “Tsy ekena intsony ny hisian’ny korontana…”
Ny taona 2013: Mamy Ravatomanga : Fiaramanidina an-jatony miliara